Enwere otutu ozi n’ebe ahụ mgbe ọ na-abịa internationalization, ịkọwapụta ya na itinye koodu n’ime ngwa weebụ. Enwekwara otutu nghotahie banyere ihe onye obula na-enye maka ngwa weebụ. Nke a bụ ihe m were…
Ntughari: Ikike imata asụsụ na ebe onye ọbịa na-eleta. Emere nke a site na arịrịọ HTTP ebe amata ndị ọbịa na mpaghara. Na nke m, nke ahụ bụ en-US. “En” bụ Bekee na “US” bụ United States. Nke a bụ ntọala n’ime sistemụ nrụọrụ m.
N'ime ụwa agwakọtara agwakọta, ịkọwapụta asụsụ anaghị ekwupụta asụsụ ọzọ. Agbanyeghi na m nọ na en-US, enwere m ike ịgụ asụsụ dị iche iche site na iji agwa dị iche… nke ahụ bụ ihe na - eme ma m jiri ya Google Hindi (Anaghị m eji Google Hindi eme ihe). Arịrịọ m maka mpaghara na njirimara agwa bụ otu mgbe m rịọrọ maka Google Bekee peeji nke, mana ana m enyeju akwụkwọ nke m na-enweghị ike ịgụ n'ihi na enweghị m njirimara agwa. Ihe niile na-abịa ???????????… Agbanyeghị, enwere m ike ijikwa agwa ahụ etinyere na Firefox (Firefox> Mmasị> Nke di elu> Asụsụ):
Yabụ… ma ọ bụrụ na m bụ nwa akwụkwọ Hindi, na-amụ Bekee na Purdue ma jikọọ na Okwey gaa na ihe nkesa ụlọ akwụkwọ, na ezumike na Australia… enwere ntọala 3 dị iche iche achọrọ itinye na ngwa ahụ ka ọ bụrụ nke ụwa - yana ọ dịghị onye dabere na nke ọzọ.
IKWU: Enwere m obi ụtọ zuru oke nke iso ndị ezigbo Icelandair na-arụ ọrụ ma nwee ike ịgwa gị na ha bụ ụfọdụ ndị ọkachamara kachasị mara amara na ndị enyi m nwere obi ụtọ na m na-arụ ọrụ. Ọ bụ naanị mba dị ịtụnanya na ndị mmadụ! Gaa nleta… were Icelandair ma hụ na ị gara Oke Osimiri Blue!
Enwere koodu nhọta dị iche iche n’ime otu asụsụ anaghị egwuri egwu nke ọma! Ihe Nlereanya: E-mail Japanese nke edepụtara na Shift-JIS nwere ike ịpụta na kọmputa onye Japan na-enweghị ike ịgụgharị ya na mpaghara-ja-JP n'ihi na ihe nkesa ozi ha na-amata EUC-JP. Dị ka ọ dị, onye ahịa kwesịrị inwe ike ịtọpụta koodu ha ga-achọ yana asụsụ ha - naanị ị hụ na itinye koodu na asụsụ dabara na ihe onye ahịa na-arịọ.
Ọ bụrụ na m chọrọ ịgụ Japanese, enwere m ike ịhọrọ ma Japanese ka ọ bụrụ asụsụ m NA Mgbanwe-JIS maka koodu iji gosipụta asụsụ ahụ nke ọma. Nke a bụ ụfọdụ ihe mgbagwoju anya ịgbakwunye na mix… ụfọdụ ngbanwe ụdị na-akwado ọtụtụ asụsụ. UNICODE / UTF8 kwadoro otutu. Ndabere ya bu ezi okwu. Asụsụ ụfọdụ nwere ike ịgụ na ọtụtụ koodu ngbanwe. Ọ bụrụ na nke ahụ enweghị isi… M rịọ mgbaghara, ọ bụ okwu siri ike.
Otu ụbọchị ekwenyere m (olile anya) ihe a niile ga-agbanwe. Echere m na ndị na-emepụta akara mbụ nke koodu mpaghara nwere olile anya na asụsụ obodo ga-abụ ihe niile achọrọ… mana anyị aghọwo ọkaibe. Cheta, ọtụtụ n'ime nke a mepụtara tupu ịntanetị adị. Na biakwa obibia nke GIS, ma eleghị anya mmadụ nwere ike ịhọrọ koodu ha ma GIS ga-ejikwa ozi oge na mpaghara.
Ekwuru na eziokwu bụ "afọ" n'ihi na akara ọla ọcha bụ Ag?, N'agbanyeghị na aha "ndị ????" ọlaọcha ”ndị Takaoka? technician of ??????? nọ na-eche na agwa a na-akpọ "?" eji ya na ihe nlere nke ihe oyuyo nke ọla ọcha, ma oburu na o kpo ya.
Ekwenyesiri m ike na iweghachite polarity na nsụgharị a ga-enye dị ka akwụkwọ ọkọwa okwu n'asụsụ Bekee. Understandghọtara ntinye, nri?